Garsoore Michael Oliver oo ku qaldamay Roosihii Gianluigi Buffon iyo Cayaaryahan kale oo feer ku dhuftay? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Garsoore Michael Oliver oo ku qaldamay Roosihii Gianluigi Buffon iyo Cayaaryahan kale oo feer ku dhuftay?
(14-4-2018) Garsooraha u dhashay dalka England ee Michael Oliver ayaa lasheegayaa in uu ku qaldamay Goolhayaha Juventus Gianluigi Buffon kaas oo uu u qaatay in uu feer ku dhuftay intii uu socdey Murankii Rigooradii uu u dhigay Real Madrid.
Muuqaal iyo Sawir lashaaciyey Jimcihii ayaa Muujinaya Cayaaryahan Douglas Costa oo feer ku dhufanaya Garsooraha Waxaana Michael Oliver u qaatay qofka wax ku dhuftay in uu yahay Goolhaye Gianluigi Buffon Roose ayuuna u taagay.
Gianluigi Buffon oo ah kabtanka Juventus ayaa aad ugu qayliyey Garsooraha dalka England markii uu ka Caroodey Rigoorada uu kooxdiisa ka dhigay ilbiriqsigii ugu danbeeyey kulankii lugta labaad Wareega 8 dhamaadka koobka Horyaalada yurub balse Hada waxaa soo baxay in Roosaha lasiiyey Buffon uu ahaa mid qalad ah isla Markaana ay ahayd in Cayaarta laga Saaro Douglas Costa.